Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa dalka Finland - Halbeeg News
HELSINKI (HALBEEG) – Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamad Cabdi Xayir Maareeye oo socdaal shaqo ku jooga magaalo madaxda dalka Finland ee Helsinki ayaa halkaas kula kulmay dhiggiisa dalkaas, haweenayda lagu magacaabo Anne-Mari Virolainen.
Labada mas’uul ayaa kulankooda iskula soo qaaday qodobbo ay ugu muhiimsanaayeen xoojinta iskaashiga ganacsiga iyo waliba sidii Dowladda Finland uga faa’iidaysan lahayd fursadaha maalgashiga ee kajira Soomaaliya.
Arrimaha kale ee kulankan looga wada xaajooday ayaa waxaa kamid ahaa in ay labada dhinac si joogto ah isu waydaarsadaan aqoonta iyo Technology-yadda ganacsiga, warshadaha iyo wax soo saarka khayraadka dabiiciga ah.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamad Cabdi Xayir Maareeye ayaa sidoo kale la kulmay ganacsato iyo maalgashadeyaal u dhashay dalka Finland, kuwaas oo daneynaya in ay xiriir ganacsi la yeeshaan Soomaaliya.
Wasiir Maareeye ayaa qayb ka ahaa wafdigii Madaxweyne Farmaajo hoggaaminayey ee ka qayb galay shirka toddobaad ee Golaha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika, wuxuuna booqashadiisa Finland kahor socdaal shaqo ku tegey magaalo madaxda dalka Qadar ee Dooxa.
Maraykanka oo duqeyn cirka ah ku dilay xubno ka tirsanaa Al shabaab